महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट घरेलु मदिरा उत्पादन-Setoghar
महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट घरेलु मदिरा उत्पादन
धरान । हामि मध्य धेरैलाई रक्सी सेवन गर्दा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ। तर कति पयले यस तथ्यप्रति बेवास्था गर्दै केहि पनि हुँदैन पचाउन सकिहालिन्छनि भन्दै बढीनै रक्सी सेवन गर्दछन । तर यसो गर्नु घातक हुन जान्छ। हाम्रो शरीर बाहिर हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ , भित्रि अंगहरु कयौँ गुणा जटिल हुन्छ। ति अंग, तन्तु, अनि कोषले त झनै सुक्ष्म र जटिल कार्यहरु गरिरहेका हुन्छन ।
नेपालका गाउँघर र सहरमा जथाभावी बनाइएका र बेचिने गरेको धेरैजसो खुला रक्सीमा विषाक्त (टक्सिक) र घातक तत्व हुन्छन् । घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थमा मिसाइने अखाद्य पदार्थ, कुहिएका कपडा, फोहर बारेका तथ्यहरु विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका छन् । मोजा, जुत्ता, पुराना कपडा लगायत घरेलु मदिरालाई कडा बनाउने नाममा मिसाइने गरेको फेला पर्ने गरेका छन् । तर भर्खर रै मात्र ऊपत्यका रक्सी महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट बने गरेको रहस्य पत्ता लागेको छ । रक्सीलाई कडा बनाउने भन्दै महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट घरेलु मदिरा उत्पादन भएको फेला परेको छ । जसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाव गोंगबु (नयाँ बसपार्क)ले विगत २ महिनादेखि थालेको घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियानका क्रममा महिनावारी भएकी महिलाले प्रयोग गरेको प्याडबाट रक्सी उत्पादन हुने गरेको तथ्य पत्ता लागेको हो ।यति मात्रै हैन, रक्सी उत्पादन गर्न फाटेको जुत्ता, चप्पल, पुरानो मोजाको समेत प्रयोग हुने गरेको महानगरीय प्रहरी प्रभाव गोंगबुका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेल बताउँछन् ।मदिरा बनाउने ठाउँमा ठूलो मात्रामा महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याड, छालाको पुरानो जुत्ता, तुनासहितको पुरानो चप्पल र पुरानो मोजा भेट्टियो,’ प्रहरी निरीक्षक पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बढी नशा लाग्ने रक्सी उत्पादन गर्न महिलाले प्रयोग गर्ने प्याडको प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।’
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवाल महिनावारी हुँदा महिलाको गुप्ताङ्गबाट बग्ने रगत शरीरको अन्य भागबाट बग्ने रगतजस्तै सामान्य भएको बताउँछिन् । तर महिनावारी हुँदाको रगतमा पाठेघरको भित्री छालाका टुक्रा, योनीमा भएको सेतो पदार्थ र हर्मोनहरु पनि रगतसँगै बाहिर आउने उनको भनाइ छ । ‘महिनावारी हुँदा महिलाको गुप्ताङ्गबाट रगतमा त्यस्तो कुनै पदार्थ (तत्व) हुँदैन, जसले मानिसलाई लठ्ठ बनाउने तथा नशा लाग्ने काम गरोस्,’ डा। अग्रवालले लोकान्तरसँग भनिन् ।
अर्का स्त्री रोग विशेष डा. बालकृष्ण साह भने महिनावारी भएको प्याड प्रयोग गर्दा रक्सी बढी नशालू (कडा) बन्छ भन्नु, मानसिक भ्रम मात्रै भएको बताउँछन् । ‘कुनै पुरुषलाई महिलाको एडिक्सन हुन सक्छ । त्यस्तो व्यक्तिले महिलाले प्रयोग गर्ने प्याड मात्र हैन, कपडा, मोजाबाट पनि नशा लिन सक्छ,’ डा। साह भन्छन्, ‘त्यो एक प्रकारको मनोरोग हो ।’
महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने प्याडमा पनि विभिन्न रसायनिक पदार्थ हुने हुँदा यसबाट बनेको रक्सी सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने साहको भनाइ छ । प्याड, छाला, पुरानो जुत्ता र चप्पल तथा प्लास्टिकबाट बनाइएको रक्सीले दिमाग, कलेजो र पेटमा गम्भीर असर पुर्याउने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यस्तो रक्सीमा कार्बन मनोअक्साइडको मात्रा बढी हुने भएकाले मानिसमा दिमागी क्यान्सर, फोक्सो, कलेजो तथा पेटको क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने धेरै सम्भावना हुन्छ ।